တစ်ဦး Broken နှလုံးကင်ဆာအားထောက်ကူနိုင်ပါသလား? - Tele RELAY တစ်ခု
မူလစာမျက်နှာ » ကနျြးမာရေးသတင်းများ "တစ်ဦး Broken နှလုံးကင်ဆာအားထောက်ကူနိုင်ပါသလား?
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, ဇူလိုင်လ 17, 2019 (HealthDay သတင်း) - "Broken နှလုံးရောဂါ"ရုံထက်ပိုမိုထိခိုက်စေနိုင်ပါစေ နှလုံးနယူးသုတေသနအကြံပြုထားသည်။
အစွန်းရောက်နေစဉ် စိတ်ဖိစီးမှု ချစ်ရသူတစ်ဦးဆုံးရှုံးသွား၏-ထားပြီးဆက်စပ် နှလုံး ကြိုတင်သုတေသနအတွက်မမှန်, တစ်ဦးလေ့လာမှုအသစ်ကျိုးနှလုံးရောဂါစတေးလျနှင့်အတူတစ်ခုမှာခြောက်လုံးရှိလူများခဲ့ကွောငျးတှေ့ရှိ ကင်ဆာ။ တောင်မှပိုဆိုး, သူတို့ဟာသူတို့ရဲ့ကင်ဆာရောဂါပြီးနောက်ငါးနှစ်ဆက်လက်ရှင်သန်နိုင်ဖို့လျော့နည်းကဲ့သို့ဖြစ်ကြ၏။
"တစ်ဦးသည်ခိုင်ခံ့ဆက်စပ်မှုတွေ entre Takotsubo syndrome ရောဂါ [ကျိုးပဲ့နှလုံးရောဂါ] နှင့်ဝျေါရှိပုံ," လေ့လာမှုအကြီးတန်းစာရေးဆရာဒေါက်တာခရစ်ယာန် Templin ပြောပါတယ်။ သူဟာဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံတက္ကသိုလ်ဆေးရုံဇူးရစ်မှာစူးရှသောနှလုံးစောင့်ရှောက်မှု၏ဒါရိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။
"Takotsubo syndrome ရောဂါဝေဒနာရှင်စုစုပေါင်းရှင်သန်မှုကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေရန်ကင်ဆာစစ်ဆေးခြင်းများတွင်ပါရန်အဘို့အဒါကြောင့်အကြံပြုလိမ့် shoulds" ဟုသူက Que le est စစ်မှန်တဲ့ချေပြောသည်။ သို့သော်လေ့လာမှုတစ်ခုမှာအခြားဖြစ်ပေါ်စေသည်ဖြစ်သည်ဟုသက်သေပြသသည်မဟုတ်။
Broken နှလုံးရောဂါရုတ်တရက်ပြင်းထန်သောဖြစ်ပေါ်စေသည် ရင်ဘတ်နာကျင်မှု နှင့်တစ်ဦးအဘို့မှားနိုင်ပါတယ်အသက်ရှုမဝြခင်းဒါက နှလုံးရုတ်တရက်ဖောက်ပြန်မှု။ ဤရွေ့ကားရောဂါလက္ခဏာတွေဟာ American Heart Association (အေ့ဟေ) selon စိတ်ဖိစီးမှုဟော်မုန်းရုတ်တရက်တစ်ဟုန်ထိုး, တစ်တုံ့ပြန်မှုဖြစ်ကြသည်။
အဆိုပါလိုအပ်ချက်လက်ကိုကျယ်ဖို့နှလုံးရဲ့မြစ်ရေတင်စီမံကိန်းအခန်းထဲကဖြစ်ပေါ်စေသည်, သုတေသီကဆိုပါတယ်။ ဒါက Cluster နှင့်နှလုံးထိရောက်စွာအသွေးအားစုပ်လို့မရဘူးဆိုလိုသည်။
ကျိုးနှလုံးရောဂါရုံပြီးနောက်-မဆိုနှစ်နှစ်ကာကာစိတ်ခံစားမှုအတှေ့အကွုံမြားအကွောငျးဖွစျနိုငျ။ အဆိုပါထီအနိုင်ရကဲ့သို့သောကိုခစျြတစျဦး၏အသေခံခြင်း, တစ်ဦးအဖွဲ့ဟာသို့မဟုတ်ကွာရှင်း, ဘဏ္ဍာရေးပြဿနာတွေနဲ့တောင်မှအပြုသဘောအတွေ့အကြုံကိုနှစ်နှစ်ကာကာတစ်နှစ်ကျိုးနှလုံးရောဂါဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်, အအေ့ဟေဟုပြောသည်။
ဗိုလ်မှူးရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ စိတ်ဖိစီးမှု အေးဆေးတည်ငြိမ်တဲ့သြကျိုးနှလုံးရောဂါဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်။ တစ်ဦးကရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ဒဏ်ရာသို့မဟုတ်ခွဲစိတ်မှု, အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာပျက်ကွက်ခြင်းနှင့်ရောဂါပိုးနှလုံးရောဂါကျိုးပဲ့ဖို့ contribuer နိုင်ပါတယ်ဒါကရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖိစီး၏ဥပမာများမှာလေ့လာမှုမှတ်ချက်ချသည်။
အဆိုပါလေ့လာမှုအသစ်ကျိုးနှလုံးရောဂါနှင့်အတူဖွင့်ကျော် 1,600 ကလူလည်းပါဝင်သည်။ သင်တန်းသားများကို 26 ရှိခဲ့သို့မဟုတ်ရှစ်ဥရောပနိုင်ငံများနှင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအပါအဝင်ကိုးဦးကွဲပြားခြားနားသောနိုင်ငံများရှိဆေးဘက်စင်တာများမှာစုဆောင်း။
ကင်ဆာရောဂါရှိတယ်လို့တွေ့ရှိခဲ့သူများသည်အနက်ဆုံးအမျိုးသမီးတွေဖြစ်ကြ (88%) နှင့်သူတို့၏ပျမ်းမျှအသက် 70 ခဲ့။
ကင်ဆာဖြစ်ပွားမှု၏ဖြစ်ပွားမှုအများကြီးအဆင့်မြင့်သန်းကပုံမှန်အားဖြင့်မျှော်လင့်ထားလိမ့်မလားခဲ့, Templin ကဆိုသည်။ ဒါကလိင်အပေါင်းတို့နှင့်အသက်အရွယ်အုပ်စုများနှစ်ဦးစလုံးအတှကျစစျမှနျတဲ့ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဥပမာအားဖြင့်, 44 နှစ်နှင့်အငယ်အသက်အမျိုးသမီးတွေအတွက်ကင်ဆာများ၏မျှော်လင့်ထားသည့်နှုန်းထားကိုဒါဟာ 0.4% ဖြစ်ခဲ့သည်ကျိုးနှလုံးရောဂါနှင့်အတူသူများသည်အဘို့အ 8% ရည်မှန်းချက်ဖြစ်ပါတယ်။ ယောက်ျား 45 ဟောင်းနှစ်ပေါင်း 64 ဖို့အတွက်, ကင်ဆာ၏မျှော်မှန်းမှုနှုန်း2ကျိုးနှလုံးရောဂါနှင့်အတူ% က de CES ရည်မှန်းချက်ခဲ့, ဒါဟာ 22% ဖြစ်ခဲ့သည်။ အသက်ကြီးအမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးနှစ်ဦးစလုံးအတွက်, မျှော်မှန်းကင်ဆာဆဲလ်တွေကျိုးနှလုံးရောဂါနှင့်အတူသူများသည်များအတွက်မျှော်လင့်ထားလိမ့်မလားနှစ်ကြိမ်အဘယ်အရာထက်ပိုခံခဲ့ရသည်။